काठमाडौं। सानिमा बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याएर नेपालमा लगानी गर्ने प्रकृया सुरु गरेको छ। बैंकले यसका लागि विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) सँग कर्जा सम्बन्धि प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। सम्झौतापत्रमा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दहाल र आइएफसीका आवासीय प्रतिनिधि मोहमद रेहान रसिदले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौतापछि देशमा
काठमाडौं । एसियन लाइफ इन्सुरेन्सले आज जेठ १० गते देखि सर्वसाधारण समूहको ९८ हजार २४६.२० कित्ता सेयर लिलामीमा ल्याएको छ । यसमा न्यूनतम १०० रुपैयाँलाई आधार मानेर प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा बोलपत्रमा सहभागी हुनुपर्ने छ । लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धक एनआइबीएल एस क्यापिटल लाजिम्पाट काठमाडौं सहित यसका लालदरबार, लगनखेल, पोखरा, बुटवल, वीरगञ्ज र
भक्तपुर । “नरुनुस् न आमा, नरुनुस् न दादा ।” स्कुल पोशाकमै रहेकी बालिकाले भक्तपुर अस्पतालको चौरमा आफू रुँदै आफ्ना आफन्तको आँसु पुछिदिँदै गरेको देख्दा अस्पताल परिसरमा झुम्मिएकाको आँखा रसाएका थिए । दुर्घटनामा आमा र भाइ गुमाएकी लोकन्थलीकै ओम ज्ञान मन्दिरमा कक्षा १० मा पढ्ने १५ वर्षकी अनुजा घिमिरे स्कुलबाटै अस्पताल
ग्लोबल आइएमई बैंकद्धारा विद्यालयलाई कम्प्यूटर सहयोग
काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेडले २५% हकप्रद शेयर लिलामीमा माग भन्दा अधिक बढी निवेदन परेका छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले
सूचनाको हकसम्बन्धी कार्यशाला शुरु
कालीमाटीमा आजको थोक मूल्य विवरण
एसियन लाइफको ९८ हजार कित्ता सेयर लिलामी
बिरामी छोराको उपचार गर्न अस्पताल हिडेकी सविताको
यस्तो छ चितवनमा नेपाली भाषा बुझ्ने
यसरी ‘लर्न एण्ड अर्न’ गर्दै इजरायलको
काठमाडौं । सरकारी सेवा सम्बन्धी गुनासाहरुलाई अब सरकारले मोबाइल एपबाटै सुन्ने अवधारणा तयार गरेको छ । यसका लागि ‘नागरिक अधिकार’ मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ । यो एप आधुनिक र सुविधाजनक हुनेछ । नागरिकले सजिलै प्रयोग गर्न सक्ने गरी यसको निर्माण गर्ने योजना छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले यस्तो एप निर्माणका लागि
निजी आवास पुर्ननिर्माणले गति लिएसँगै, चार लाख बढी लाभग्राहीको दोस्रो किस्ता प्रमाणीकरण
काठमाडौं । एसियन लाइफ इन्सुरेन्सले आज जेठ १० गते देखि सर्वसाधारण समूहको ९८ हजार २४६.२० कित्ता सेयर लिलामीमा ल्याएको छ । यसमा न्यूनतम १०० रुपैयाँलाई आधार मानेर प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा बोलपत्रमा सहभागी हुनुपर्ने छ । लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धक एनआइबीएल एस क्यापिटल लाजिम्पाट काठमाडौं सहित यसका लालदरबार,
काठमाडौं । रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको आइपीओ बुधबार बाँडफाँड भएको छ । कम्पनीको सेयर विक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटलको कार्यालय लाजिम्पाटमा बाँडफाँड गरिएको हो । हाइड्रोको सेयर गोलाप्रथाबाट ७६ हजार ४४० जना आवेदकले १० कित्ताका दरले प्राप्त गरेका छन् । रैराङको साधारण सेयरमा कुल एक
आयोजना प्रभावितका लागि शुभम पावरको २
नागरिक लगानी कोषले फेरि दिने भयो
नेसनल लाइफको ९९ लाख ३६ हजार
सानिमा बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याएर नेपालमा लगानी गर्ने, आइएफसी सँग…
आयोजना प्रभावितका लागि शुभम पावरको २ लाख कित्ता आइपीओ खुल्दै,…
धनगढी । सुदूरपश्चिमको धार्मिक तथा प्राकृतिक गन्तव्यहरुलाई एकसाथ समेटेर सोसाईटी अफ ट्राभल एण्ड टूर अपरेटर्स नेपाल (सोट्टो–नेपाल) ले पर्यटन प्याकेज सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।सुदूरपश्चिम र भारतको उत्तराखण्ड अन्तर्गत पर्ने विभिन्न गन्तव्यहरुलाई समेटेर बढीभन्दा बढी पर्यटक सुदूरपश्चिम भित्र्याउने उदेश्यसहित सोट्टोले उक्त उद्घोष गरेको छ ।
मुलुकको विकास गर्न पर्यटनबाटै सकिन्छ : मन्त्री
मुख्यमन्त्री पौडेलद्वारा ककनीको अवलोकन, पर्यटनको “हब” बनाउने
पर्यटन मन्त्री अधिकारीको जोड : युग सुहाउँदो
अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन दौड जेठ ५ मा हुने
रक्षामन्त्री पोखरेल द्वारा स्याफ्रुबेँसी–मैलुङ सडकखण्ड उद्घाटन
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सोमबार दिउँसो ४ बजे
काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेडले २५% हकप्रद शेयर लिलामीमा माग भन्दा अधिक बढी निवेदन परेका छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको चुक्तापूँजी रु. ८ अर्ब पु¥याउन बुझाएको पूँजी योजना बमोजिम बैंकले सो हकप्रद शेयर वितरण गरेका हो । शेयर बिक्रीप्रबन्धका लागि लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लि.लाई
सानिमा बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याएर नेपालमा लगानी
जनता बैंकको एकैसाथ ५ नयाँ शाखाबाट कारोवार
मेगा बैंकको खाता अब इन्टरनेटमार्फत खोल्न सकिने
बुटवल पावरको ४४ करोड नगद लाभांश पारित
आयोजना प्रभावितका लागि शुभम पावरको २ लाख कित्ता आइपीओ खुल्दै, कहाँवाट दिने आवेदन ?
यस्तो छ, कालीमाटीमा आजको तरकारीको थोक मूल्य विवरण
आजको तरकारीको थोक मूल्य विवरण